ရုတ်တရက်မြင်ရသူတိုင်းကို အံ့သြ ထိတ်လန့်သွားစေမယ့် အရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingရုတ်တရက်မြင်ရသူတိုင်းကို အံ့သြ ထိတ်လန့်သွားစေမယ့် အရာများ
November 23, 2021 Wai Phyo Oo Amazing 0
ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ရုတ်တရက်မြင်ရသူတိုင်းကို ခေတ္တခဏတော့ မှင်သက်အံ့သြပြီး ထိတ်လန့်သွားစေမှာ သေချာပါတယ်။ တစ်ကယ်ပဲ ဒီပုံတွေက သင့်ကိုထိတ်လန်စေနိုင်မလားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ….. shwekhitonlinetv.com
၁။ အိမ်တွေကိုဝင်တိုက်တော့မယ့် သင်္ဘောကြီး
ရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီပုံက ဓာတ်ပုံ (၂) ခုပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် သေသေချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ပုံ (၁) ခုတည်းမှာ ကုန်တင်သင်္ဘောအကြီးကြီးက ကမ်းခြေက ဂေါက်ကွင်းနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်လေးကို ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂။ ဖူဂျီတောင်ခြေက လူနေအဆောက်အဦးများ
ဖူဂျီတောင်ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ (၁၀၀) အကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ ဖူဂျီတောင်ဟာ မီးတောင်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက အန္တရာယ်အများဆုံးတောင် (၃) ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံမှာတော့ ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ ဖူဂျီတောင်နဲ့ အလွန်နီးကပ်တဲ့နေရာမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ လူနေအဆောက်အဦးတွေကို အသည်းယားဖွယ်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ရေခဲတောင်ကြီးနားက လူနေအိမ်
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနောက်မှာကြီးမားတဲ့ ရေခဲတောင်ကြီးရှိနေတာက အိပ်ယာထတိုင်း လှပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ခံစားရစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ အိမ်ဆောက်ပြီး နေတာက အင်မတန်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်မလိုပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
၄။ ဂျပန်က ဂေါ်ဇီလာပြတိုက်
ဒါကမကြာသေးခင်ကမှ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဂေါ်ဇီလာပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း အသည်းယားစရာအခိုက်အတန့်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ မတော်တဆများ ပြုတ်ကျခဲ့ရင်
ဒါကတော့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ မက္ကာမြို့မှာရှိတဲ့ Arabj Al Bait Tower ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ လူတစ်ဦးပုံပါ။ နာရီစင်ကြီးပါရှိတဲ့ ဒီတာဝါဟာ ပေပေါင်း (၂၀၀၀) နီးပါးမြင့်တာကြောင့် သူ့အနေနဲ့ မတော်တဆများပြုတ်ကျခဲ့ရင် မတွေးဝံ့ရပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၆။ မှော်ဝင်နေတဲ့ မြင်းခေါင်းကြီးများ
စကော့တလန်အလယ်ပိုင်း Falkirk မြို့ပြင်မှာတည်ရှိတဲ့ မြင်းခေါင်းရုပ်တုကြီးတွေကလည်း မှော်ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဧရာမမြင်းကြီးတွေလို့ထင်ရလောက်အောင် လက်ရာမြောက်လွန်းပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ မိုးကြိုးပစ်တဲ့အချိန် ဓာတ်ပုံဆရာက အမိအရ လက်စွမ်းပြရိုက်ကူးထားလေတော့တစ်ကယ်ပဲ အသက်ဝင်လာတော့မယောင်ထင်ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၇။ ​ရေထဲကထွက်လာတဲ့ ဧရာမလက်ကြီးနှစ်ဖက်
ဒါကတော့ နာမည်ကျော် အီတလီပန်းပုဆရာ Lorenzo Quinn ရဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်တစ်ရေးနိုးတဲ့ အချိန်မျိုးသာ ဒီလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကို ရုတ်တရက် မြင်တွေ့ရရင် မထိတ်လန့်ဘဲနေမယ့်သူမရှိလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ shwekhitonlinetv.com
၈။ လှိုဏ်ဂူထဲက နဂါးမျက်လုံးကြီး
ယူကေ၊ အနောက်လန်ကတ်ရှိုင်းယား ဒေသက လျှို့ဝှက်လှိုဏ်ဂူ တစ်ခုထဲမှာတော့ နဂါးမျက်လုံးနဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့ ဧရာမ​ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကြီးက သင့်ကိုမျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံဘဲ အစဥ်အမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့တောင်ထင်ချင်စရာကောင်းပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒီပုံကိုမြင်ရင်တော့ ကမ္ဘာပျက်တဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုလို့ ထင်မြင်ကောင်း ထင်မြင်မိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒါဟာ မိုးလေဝသဖြစ်စဥ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရေဆင်နှာမောင်းတစ်ခု အစပျိုးနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ လေပေါ်ပျံနေတဲ့ ရေဘဝဲကြီး
ဒီပုံမှာမြင်ရတာက လေပေါ်ပျံနေတဲ့ ရေဘဝဲကြီးလား ? ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားကမ္ဘာက ဂြိုဟ်သားလား ? အမှန်စင်စစ်က ဒါဟာ အထူးဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ `စွန်´ တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန် လည်းတီထွင်တက်ပါပေ့။ shwekhitonlinetv.com
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတောင် သိပ်မသိကြတဲ့ အမေရိကန်က အထိမ်းအမှတ်ရုပ်တုများ